UPDATE: Urur goboleedka IGAD oo war cusub ka soo saaray doorashada Galmudug (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Urur goboleedka IGAD oo war cusub ka soo saaray doorashada Galmudug...
UPDATE: Urur goboleedka IGAD oo war cusub ka soo saaray doorashada Galmudug (Maxaa cusub?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Ergeyga IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Maxamed Cali Guyo ayaa ammaanay dadaallada dib-u-heshiisiinta iyo dowlad-dhisida ka socda Galmudug.
Wakiilka IGAD ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyada in si nabdoon oo loo dhan yahay ay u dhacaan geedi socodka dib-u-heshiisiinta iyo doorashooyinka maamulka Galmudug.
Guyo ayaa ugu baaqay dhinacyada Galmudug inay ka shaqeeyaan si wadajir ah xalinta khilaafka taagan iyo dhismaha maamul cusub, oo ku yimaada qaab dimuqraadi ah.
Wuxuu xusay in doorashada nabad iyo dimoqraadi ah oo ka dhacda Galmudug ay abuuri doonto horumar la taaban karo oo ay kamid yihiin dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha taas oo gacan ka geysan doonta gaaritaanka qorshaha guud ee dib usoo celinta Soomaaliya.
Ergeyga gaarka ah ee IGAD, ayaa waxa uu u mahadceliyay saaxiibada beesha caalamka taageeradooda aan kala go ‘lahayn ee Soomaaliya oo hadda ka soo ka banaysa colaad muddo dheer socotay iyo dhibaatooyin kale.
Mr. Guyo ayaa markale ku celiyay sida ay uga go’antahay IGAD inay sii waddo wada-shaqeynta ay la leedahay Galmudug iyadoo ay weheliso dadaalkooda ku aadan dib-u-heshiisiinta iyo maamul loo dhan yahay oo wax ka beddeli doona Galmudug.
Ergeyga IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya
Maxamed Cali Guyo